Shirkada Hormuud oo Muqdisho deeq ugu qeybisay dad danyar ah ⋆ Soomaaliweyn | Wararka Iyo Warbixinada Dalka | Somalia's Latest News
Home Wararka Shirkada Hormuud oo Muqdisho deeq ugu qeybisay dad danyar ah
Shirkada Hormuud oo Muqdisho deeq ugu qeybisay dad danyar ah
Hay’adda Hormuud Telecome Foundation ayaa shalay Magaaladda Muqdisho ugu Qaybiyay deeq lacageed Qaar ka Mid ah Qoysaska Danta yar ee ku dhaqan Magaaladda Muqdisho.
Qoysaskan ayaa waxaa laga soo Aruuriyay Qaar ka Mid ah Xaafadaha Degmooyinka Gobalka Banaadir,iyadoo qeybinta Deeqdan loogu talagalay in ay uga Faa’ideystaan Gudashada Fadliga Bisha Barakeysan ee Ramadaan.
Madasha lagu qeybinayay Deeqdaan ayaa waxaa ku sugnaa Xildhibaano ka tirsan Golaha shacabka Baarlamaanka Soomaaliya iyo Masuuliyiinta Hay’adda Hormuud oo deeqdan Maanta qeybisay.
Qaar ka Mid ah Dadka la siiyay Deeqda Lacageed ayaa Madaxda Hay’adda Hormuud Foundation uga mahad celiyay Caawinta gargaarka oo ay ku tilmaameen in lagu soo beegay xiligi ay u baahnaayeen.
Gudoomiyaha Hormuud Telecome Foundation Mudane Cabdullaahi Cismaan Nuur ayaa Madasha ka sheegay in Deeqdan ay qeyb ka tahay deeqo Caawinaad oo ay shirkadaan ugu talagashay Dadka dhibaateysan ee ku nool Degmooyinka Gobalka Banaadir.
Sidoo kale Gudoomiyaha ayaa sheegay in ay ku dadaali doonaan sidii ay usoo kordhin lahaayeen Deeqaha Caynkaan oo ay siinayaan Dadka aan waxba heysan ee ku dhaqan Magaalada Muqdisho.
Xildhibaan Khaalid Macow oo ka mid ah Mudanayaasha Golaha shacabka Dalka ayaa Madaxda Shirkadda Hormuud Foundation uga mahadceliyay in ay mar walba u taagan yihiin sidii ay u caawin lahaayeen dadka ga gaarka u baahan ee ku nool Gobalka Banaadir iyo Gobolada Dalka oo dhan.
Sidoo kale Xildhibaan Khalid Macow ayaa sheegay in Dadka Maanta la siiyay Deeqda ay ka mid ahaayeen Dadka gargaarka noocaan oo kale ah u baahan ee ku nool Magaalada Muqdisho.
Qeybintan ayaa qeyb ka noqoneysa Caawinaad ay Hay’adda Hormuud Foundation ka waday Guud ahaan Gobalka Banaadir iyadoo lagu caawinayo Dadka Danta yar iyo kuwa Tabaaleysan ee ku nool Muqdisho si ay uga faa’ideystaan Fadliga Bishara Barakeysan ee Ramadaan.
Previous articleAl-Shabab oo la wareegay gacan ku heynta deegaan ay joogeen ciidamada Kenya iyo Jubbaland
Next articleIran oo war ka soo saartay xiisada cirka isku shareertay ee kala dhaxeyso Mareykanka